news – Myanmar Celes Media
ကျန်းမာရေးကေင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်
Aba Sayar October 27, 2019
ဒီကနေ့ (၂၇. ၁၀. ၂၀၁၉) မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ် Grand Hanthar Hospital တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်ထံသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ သွားရောက် တွေ့ဆုံ အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါက်တာ…
“ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းဖို့ မယားငယ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ မယားကြီး”
Aba Sayar October 25, 2019
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် အမျိုးမျိုး စိတ်ညစ်ခဲ့ရပေမယ့်၊ သူမရဲက ယောက်ျားနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မယားငယ်က ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ရူပီး သိန်း(၅၀) ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုပါ။ အဲဒီကမ်းလှမ်းမှုကို မယားကြီးဖြစ်သူက ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။…
ကျောင်းသောက်ရေအိုးထဲတွင် 3G ပိုးသက်ဆေးများ ထည့်ထား၍ သောက်သုံးမိသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအယောက် (50)ကျော် အဆိပ်မိ
ကျောင်းသောက်ရေအိုးထဲတွင် 3G ပိုးသက်ဆေးများ ထည့်ထား၍ သောက်သုံးမိသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအယောက် (50)ကျော် အဆိပ်မိ မြောင်းမြမြို့နယ် ရန်မနိုင်တိုက်နယ် လင်ဒိုင်းလက်ပံကျေးရွာ အလက(ခွဲ)မှ သောက်ရေအိုးထဲတွင် 3G ပိုးသက်ဆေးများ ထည့်ထား၍ သောက်သုံးမိသူကျောင်းသား/ကျောင်းသူအယောက် (50)ကျော် အဆိပ်မိ၍ စကမြားတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသနေရပါသည်။ (မှတ်ချက်)ဆက်လက် လာနေပါသည်။
ငါ သေသွားရင် အသုဘမှာမင်္ဂလာဆောင်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ချစ်သူရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့သူ
တရုတ်နိုင်ငံက (၃၅) နှစ်အရွယ်၊ ဆူ (Xu) ဟာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ချစ်သူ ယန် (Yang) ကို အသုဘမှာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သူ့ချစ်သူရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အသုဘကို အောက်တိုဘာလ (၂၀) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆူဟာ သူ့ချစ်သူ ယန်ရဲ့ နောက်ဆုံး…
သားသမီးချစ်၍ ရွှေထည်ပစ္စည်း ဝတ်ဆင်သော မိဘများသတိထားကြစေချင်အကြွေးများသည့်အမျိုးသမီးက တစ်ရွာတည်းနေ ၉ နှစ်သမီးကို နားထောင်းချွတ်မပေးသဖြင့် ရိုက်သတ်
Aba Sayar October 24, 2019
သားသမီးချစ်၍ ရွှေထည်ပစ္စည်း ဝတ်ဆင်သော မိဘများသတိထားကြစေချင်အကြွေးများသည့်အမျိုးသမီးက တစ်ရွာတည်းနေ ၉ နှစ်သမီးကို နားထောင်းချွတ်မပေးသဖြင့် ရိုက်သတ် ပဲခူး အောက်တိုဘာ ၂၄တစ်ရွာတည်းနေ ၉ နှစ်သမီးကို နားတောင်းချွတ်မပေးသည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုင်ကယ်ရှော့ဘားဖြင့် ရိုက်သတ်လိုက်သည့် လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရွှေကျင်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ ပဒဲကောကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဖယ်အင်းကျေးရွာတွင်…
ကြင်ရာတော်ကို ဘွဲ့ပြန်သိမ်းပြီး ထိုင်းဘုရင် နန်းတော်က အရာရှိကြီးတွေကို ရာထူးထပ်ဖြုတ် ထိုင်းဘုရင် ဝချီရာ လောင်ကွန်းဟာ နန်းတော်ကို သစ္စာဖောက်ဖျက်လို့ဆိုပြီး ကြင်ရာတော်ကို ဘွဲ့အဆောင်အယောင်တွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် နန်းတော်က အရာရှိ ခြောက်ယောက်ကို အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အကျင့်ပျက်လုပ်ရပ်တွေ လုပ်တယ်ဆိုပြီး ရာထူးက ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုလို ထုတ်ပယ်ခံရသူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊…
၁၁ နှစ်ကလေးအများစုမှာတော့ အပူပင်မရှိ ကျောင်းတက်နိုင် ၊ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆော့ကစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီကလေးလေးကတော့ သူရဲ့ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၄ နှစ်သားအရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးရင်း ကျောင်းတက်နေရတာပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆော့ကစားနေတာကို ငေးမောကြည့်နေယုံကလွဲပြီး သူ့မသန်စွမ်းညီငယ်လေးကို ဂရုတစိုက် ပြုစုနေရလို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်မကစားနိုင်ရှာပါဘူး။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအမည်ကတော့ အဲလစ်ပီရဲတာ…
Aba Sayar October 23, 2019
နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတွင်Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက် ခံရသည့် ကလေးငယ်ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ၉ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကို ယနေ့စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အောင်ကြီးအာမခံပါယ်ချလိုက်ကြောင်း တရားသူကြက ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် အမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးတွင် စစ်ချက်ယူသော ဗစ်တိုးရီးယားအမှု၏ ရှစ်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် အောင်ကြီး၏ရှေ့နေက အာမခံပေးရန်ရုံးတော်သို့ အောက်တိုဘာလ…
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်းခံရသည် ကလေးငယ်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် တရားခံဟူယူဆခံထားရသူ ကိုအောင်ကြီး(ခ)အောင်ကျော်မျိုးသည် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း၏ ဇ(၁၄) အဆောင်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုလုံးဝကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု အောင်ကြီးရှေ့နေဒေါ်စုဒါလီအောင်၏ စစ်ချက်ယူမှုတွင် တရားခွင်၌ ဒေါ်နီလာအေးကထွက်ဆိုလိုက်သည်။ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ မူကြိုဆရာမဖြစ်သူ ဒေါ်နီလာအေးကို ဗစ်တီုးရီးယားအမှုတွင် တရားလိုပြသကသေအဖြစ် ယနေ့မနက်ပိုင်း၌…
မသေခင်လှူချင်လို့ ခဏခဏမဖမ်းပါနဲ့ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ မဟာဗန္ဓုလမ်းမ​ပေါ်က ပေါင်မုန့်သည် အဘွားအို
Aba Sayar October 22, 2019
ဘယ်အချိန်လာဖမ်းမှာလဲဆိုပြီး စိုးရိမ်တစ်ကြီးနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမပေါ် ၃၂လမ်းထိပ်မှာ ပေါင်မုန့်ရောင်းနေတဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းတစ်ယောက် ဝယ်သူကို မျှော်နေရှာပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကာလက သူရောင်းတဲ့နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခံရလို့ သူ့ပေါင်မုန့်တွေ အသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက် ကျောတစ်ခင်းစာအိပ်စက်ဖို့ ၊ဆေးကုသဖို့၊ ဝမ်းရေးအတွက် ဒီပေါင်မုန့်ကို သူဆက်ရောင်းမှ ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ငွေနှစ်သိန်းချေးယူပြီး ဒီနေရာလေးမှာပဲ ပြေးတစ်လှည့် ပုန်းတစ်လှည့်…